ဆောင်းပါး | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
.တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ကြခြင်းကို ဝမ်းသာပေးနိုင်ဖို့ (မုဒိတာစိတ်မွေးနိုင်ဖို့) လိုမည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံရေးပါတီ လမ်းကြောင်းပေါ်မှ ညီညွတ်မှု၊ အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ အပြန်အလှန် ယုံကြည်နားလည်မှုဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အန ...
.ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို ပြောရရင် စိတ်ဆိုးစရာတွေလည်းရှိ၊ စိတ်မောစရာတွေလည်းရှိ၊ အားမရတာတွေလည်းရှိ၊ ဒေါသဖြစ်စရာတွေလည်းရှိ၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုပြစ်ချင်တာတွေလည်းရှိ၊ အသိတရားကို အမှီပြုပြီး စိတ်ရှည်ရှည်ထားရမယ်လို့ ခံစားချက်ဖြစ်ရ ...
.၁။ဧ ပြီလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်။ မနက်ကိုးနာရီလောက် ဖုန်းကမြည်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တယ်။ တဖက်က ဆက်လာသူက ကဗျာဆရာ ကိုလွမ်းဏီ။ “ဟေ့လူ … ကိုငြိမ်းဆုံးသွားပြီ။ ဒီမနက် သုံးနာရီလောက်မှာ ဆုံးသွားတာလို့ ပြောတယ်”ကျနော် မထင်မှတ်တဲ့ သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အနှေးန ...
. ‘ ခေတ်မိုး ’ သတင်းဂျာနယ်က [ ၂၀၁၄၊ မေ ၁၄ ] တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို ကောက်နုတ် တင်ပြပါသည်။ နောက်ကြောင်းပြန်၍ ကောက်ကြောင်းလှန်သင့်သည့် ကိစ္စ ( Issue ) မှာ ဖက်ဒရယ် မူဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အခြေခံ အကျဆုံး အဖြေသည် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်သည်။ ...
.“ ဒေါ်ခင်မာအေး အောက်မေ့ဘွယ် ”၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ကျမ ဘုိုကလေးကနေ ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အမ၀မ်းကွဲ မကောက်ပို့နဲ့အတူ မြရတနာဆေးခန်းမှာ သူနာပြုဆရာမ လုပ်ဖို့ပါ။ မကောက်ပို့ရဲ့ အမျိုးသားက ဦးလှတင်အောင်ပါ။ သူတို့နဲ့ ဦးလှရွှေတို့က ခြံဝိုင်းတ ...
.ကိုယ်လည်း ဘေးလွတ်ရာရှောင် သူတပါလည်းဘေးလွတ်ရာဆောင် …ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်ရင်ထဲစွဲမိပါတယ်။ ဘယ်လိုလူဟာ အလှဆုံးလဲဆိုရင် အများအကျိုးထမ်းရွက်သူမှ တကယ် လှတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တ်ာက အိမ်မဲမြို့နယ် ကြို့ကုန်းကျေးရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျ ...
. စိတ်အလျဉ်၏ လွင့်မျောရာနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ (၄) .အလွန်မှန်ကန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟောကြားသွားခဲ့တဲ့ စကားတခုကို ဘယ်သူလွန်ဆန်နိုင်မှာလဲ။ သတ္တဝါတို့သည် အဟာရပေါ်တွင် မှီတည်နေကြ၏ ဆိုတဲ့စကား ။ကြားနေကျ အရပ်ပြောနဲ့ကတော့‘ရုပ်ကိုအဟာရစောင့်တယ်’ ပေါ့လေ ။ပဲဟင်းအရည်ကျဲ ...
“စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးသည်သာ ယနေ့တော်လှန်ရေးတာဝန်ဖြစ်သည်”ဒီ ဆောင်ပုဒ်ကို ၁၉၉၄ ခု ကေအိုင်အေက ရန်သူနဲ့ စေ့စပ်ရေး လျှို့ဝှက်လုပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးအနေနဲ့ စတင်ဖော်ထုတ်သုံးနှုန်းခဲ့ရတာပါ။ ဘလောက် (Blog)မှာ တော့ ထိပ်စည ...
.လောကအတွက်ကောင်းမှု တစ်ခါတော့ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒါကို ကောင်းမှုလို့ယုံကြည်တယ်။ လူအများစုကလည်းကောင်းမှုဆိုတာကို သဘောတူ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ပြစ်မှုလို့ သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း ထောင်ထဲရောက်သွားပါတော့တယ်။ .လူ့ ဘဝဟာ တိုတောင ...
.တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ကာလမပြည့်မီ ဝီရသူက သူဟောနေကျ အမုန်းပွားစေမယ့် တရားတွေဟောတယ်။ ဒါကို အရေးယူပေးဖို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့ မင်းသုည ပြင်တယ်။ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ့် နေရာမှာ မဘသလို့ ယူဆရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက အင်အားနဲ့ နေရာလာယူထားတယ်။ အြ ...
ထက်ဝေး – ဝမ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင်(သို့မဟုတ်) တော်လှန်ရေးအတွက် အသက်ကိုရင်းခဲ့သူ
.ကျွန် တော့်ဆီမှာ သေသေချာချာသိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ စာအုပ်စင်မှာမထားဘဲ ပလပ်စတစ်နဲ့သေသေချာချာပတ် လေလုံအောင်မီးနဲ့ပိတ်ပြီး သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဆရာကြီး ၀မ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင် လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ “ဂျပန်ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လေထီးသမားများ” ...
ရုန်းကန်လှုပ်ရှား လယ်သမား – ဖိုးရာဇာ (မအူပင်)
.မြ န်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည်။ အများစုက တောင်သူလယ်သမားနှင့် လယ်ယာလုပ်သားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တောင်သူလယ်သမားသည် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရသူသာ ဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေကို ပိုင်ဆိုင်သူ မဟုတ်ပေ။ ဥပဒေနှင့်အညီ ယခင်က တစ ...
in: Uncategorized, ဒီလဖတ်စရာ, အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး
.“သုံးတတ်​လျှင်​​ဆေး မသုံးတတ်​လျှင်​​ဘေး”ဟူ​သော ဆိုရိုးစကားရှိသည့်​အ​လျှောက်​ ယ​နေ့ကမ္ဘာတဝန်းတွင်​ အင်​တာနက်​အသုံးပြုမှုသည်​ တွင်​ကျယ်​လာခဲ့သည်​။ မြို့ကြီးပြကြီးများသာမကဘဲ ​တောရွာများတွင်​လည်း လက်​​ရည်​တပြင်​တည်း သုံးစွဲ​နေကြ​လေပြီ။ ထို့​ကြောင် ...
ရွှန်းလဲ့ကတော့ အသက်အရွယ်ကြောင့်ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ဘဝဖြတ်သန်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူမှုတွေကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဒါသည် အမေ စောမွေးပေးလို့ ဖြစ်လာတဲ့ အရာလို့ပဲ ခံယူတယ်။ အမေမွေးတာ နောက်ကျ၊ လူဖြစ် နောက်ကျပေမယ့် လူငယ်တိုင်းဟာ မတူညီတဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိတယ်။.အသက်(၃၅ ...
Posted by: ဇော်မင်း
.စစ်တပ်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုဘဲ ပါလီမန်မှာ ၂၅% အမတ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်၊ တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျဖို့ လက်တလုံးအလိုမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အာဏာသိမ်းနိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးဟာ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းလွတ်ပြီး ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေလို့ မပြောရင် ဘယ်လိုပြောရတော့မှ ...
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၄၉ ) ကျွန် တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကြာနေခဲ့သလို စစ်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာ၊ စစ်ဘေးရှောင်မြန်မာပြည်သူ တိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေပြီး ဓားစာခံဖြစ်နေကြတာ၊ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေတောင်းဆိုေ ...
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၄၈ )အခုအချိန်မှာ ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်း ထုတ်ဝေရေးတိုက်တွေက စိတ်မပါနိုင်တော့ပါဘူး။ ကဗျာစာအုပ်ဟာ တနိုင်ငံလုံးက စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွေပေါ်မှာ တင်ထားပေမယ့် တကူးတကမေးမြန်းပြီး ၀ယ်မယ့်သူမရှိပါဘူး။ ကဗျာစာအုပ်ကု ...
.လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ လူနည်းစုသာ အကျိုးရှိသထက်ရှိလာမဲ့ စီးပွားရေးပေါ်လစီမျိုးဟာ တခါတရံ အချို့နိုင်ငံများမှာနှစ်ရှည်လများ သက်ဆိုးရှည်နေတာကိုလည်း လေ့လာမှတ်သားဖူးသည်။ အဲသလို နိုင်ငံမျိုးတွေဟာ များသောအားဖြင့် စစ်အာဏာရှင် (သို့မဟုတ်) စစ်ဘုရင် အသေးစားေ ...
in: ကဗျာ, ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ, အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး
. စကားဦး လက်နက်နိုင်ငံတော် (ဒါမှမဟုတ်) ပဒေသရာဇ်ယဉ်ကျေးမှုကို ထူထောင်မယ့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို အလုံးစုံဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်ရေးရမယ်လို့ ရှေ့တန်းက ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ရှေ့နေကြီးဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတယ်ဆိုတာသိရတော့ အထူးကို တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ...
Posted by: Min Zin
ရှေ့ နေဦးကိုနီဆရာဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတယ်ကြားတော့ စိတ်ထိခုိုက် တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့ ကပဲ ဆရာဦးတင်အေး စီစဉ်ပေးလို့ ဆရာဦးကိုနီ အပါအဝင် ပါမောက္ခဆရာကြီးတွေ၊ ပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ ညစာ စားရင်း နာရီပေါင်းများစွာ စကားတွေ တဝ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျနော်တု ...
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအချိန်မရွေးယမ်းနှင်းတွေဝေနေကြသလို၊ကျည်မိုးတွေရွာချနေကြပါတယ်။ နွေခါင်ခေါင်လိုပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့မီးလောင်ကွင်းတွေများစွာလည်းဖြစ်ကျန်နေရစ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေငတ်မွတ်နေတာကတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထို ...
ပညာတတ်များသို့ – ဦးအေးဆောင်
Posted by: ဦးအေးဆောင်
.အဆင့်မြင့် ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို မနေ့က တက္ကသိုလ် ဆရာ/ ဆရာမများအသင်းများကိုယ်စားပြုကော်မီတီက ကန့်ကွက်ကြောင်းသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ် ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ဆရာ/ဆရာမတွေ မပါဝင်ခဲ့ရသလို အဲဒီဥပဒေက ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လွန်က ...
.ပါမောက္ခ ဂျက်ဖရီဆက် (Jeffery Sachs) ကတော့ –“လူတွေအတွက် တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် ကိုက်ညီမယ့် မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပိုပြီးတောင်းဆိုမှုတွေ မြင့်လာနေပါတယ်။ မူဝါဒချမှတ်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ လူထုတွေပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်လိုမြှင့်တ ...
Knowledge is power ဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်မနေပြောရမှာကတော့ Facilitation is Art ဆိုတာပါပဲ။ ကျ နော့်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးသူဘဝကို ရောက်လာတာ မထင်မှတ်တဲ့ ကံကြမ္မာအချိုးအကွေ့တခုလို့ ပြောရင် ပြောလို့ရတယ်။ ပညာပေးသူဘဝကိုမရောက်ခင် အဝေးရောက်ညွန့်ပေါင်းအစိုး ...
ဦးအေးဆောင် -မင်းက ဘာကောင်မို့လဲ
“မင်းကဘာကောင်မို့လဲ”ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်တော်သိပ်မုန်းပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်သားအကျင့်မကုန်သေးတာ၊ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ရှေးရိုး ဆရာသမားကြီးတွေရဲ့ တပည့်ဖြစ်ခဲ့ရတာ၊ ပဒေသရာဇ် အစွဲအလမ်းမကင်းစင်သေးတာ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ လောင်းရိပ်အောက်မိနေတာသာဖြစ်တယ်။ အ နောက်နိုင် ...
ဇော်မင်း – စက်မှုအကြောင်းပြောရရင် …
လျှပ်စစ်မလုံလောက်တဲ့ သို့မဟုတ် လုံလောက်သော်လည်း ဈေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတခုဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အသေးစားအလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ မရှိပါ။ မြန်မာပြည်က ထွက်နေတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေကို ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဈေးချိုချိုနဲ့ သုံးနိုင်အောင် မစီ ...
၁။ အီကွေးရှင်းအဟောင်းကို စွန့်လွှတ်လာကြခြင်း ၈၈ မျိုးဆက်တွေ ပါတီတခုတည်ထောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ လိုနေပါတယ်။ သူတို့ရေရှည် နိုင်ငံရေး ဆက်လက်လုပ်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ စည်းတခုလိုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ နိင်ငံရေး ပါတီတခုတည်ထောင်ပါလို့ကျနော် ...
Posted by: ကိုအောင်မှိုင်း
“လူတယောက်ရဲ့  တန်ဘိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့တိုင်းတာရမှာပဲ” ဗန်းမော်တင်အောင် (၁၉၂၀ - ၁၉၇၈) ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့  ခေတ်အမြင်နဲ့ဘဲ ကျနော့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  ၂ဝ၁၇ ပြည်ထောင်စုနေ့ အခန်းအနား မိန့် ခွန်းမှာ ကိုးကားတဲ့ စာကဗျာ တပုိုဒ်ရှိပါတယ်။“စစ်နည်းဗျူဟာ၊ ဘယ်လိုသာလည်း စွဲကိုင်လက်နက်၊ ဘယ်လို ထက်လည်း ပြည်သူ့ နှလုံး၊ မသိမ်းကြုံးလျှင် ပြည်သူ့ ခွန်အား၊ မကိုးစားလျှင် ဓားသွားလည်းကြွေ၊ လှ ...
“ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို လျှောက်လှမ်းနေပြီ၊” “ ချီတက်နေပြီ” “လူထုအစိုးရ” “လူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရ” ဆိုတဲ့ စကားတွေ မကြာခဏကြားရတော့ ဘာတွေက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောနေကြတာလဲ ဆိုတာ စိစစ်ဖို့ လိုလာတော့တယ်။ ဒီအော်သံတွေက ၂ဝဝ၈ ခြေဥရဲ့ အောက်မှာဆိုတော့ တုံးအေ ...
သမိုင်းနောက်ခံမာ့စ်ရဲ့ အမြင်က လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရဲ့ အရင်းခံက နိုင်ငံတော် ( State ) မဟုတ်ဘူး။ လူ့အဖွဲ့စည်း ( Society ) ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူဆဖြစ်တယ်။ဘရူနိုဘာဝါ (Bruno Bauer) ရေးတဲ့ "The Jewish Question" အပေါ်မှာ မာ့စ် (Karl Marx’s) ...
“ငါဟာလမင်းကို မမြင်ရတာအနှစ် သုံးဆယ် ကြာပြီ”ဒါက လူရွှန်းရေးခဲ့တာပါ။ A MAD MAN’S DIARY စာအုပ်ထဲမှာလို့ ထင်ပါသည်။ ကျနော့်ဘ၀မှာလည်း လမင်းနှင့်လရောင်ကို မမြင်ခဲ့ရသည့် နေ့ တွေ၊ လတွေ၊ ရက်တွေ တရှည်တလျားရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ကဗျာဆရာမောင်အောင်ပွင့်၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှ ...
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ (၅၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မင်္ဂလာမွေးနေ့ပါ ဆရာမစင်သီယာ …(ဆရာမရဲ့  (၅၆)နှစ်မြောက်မွေးနေ့တုန်းက မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီး ဒီစာလေးကို ရေးခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ရေးခဲ့တာဆိုတော့ (၂)နှစ်တောင် ရှိသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီစာလေး ...
ဖြစ်တည်လာမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပုံစံ တခုဟာ ဗမာတွေထဲမှာတောင် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနဲ့ ခရိုနီများအတွက်ပဲ အကျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင် သာမန် ဗမာလူမျိုးအများစုကလည်း ထောက်ခံမှာ မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က ထောက်ခံဖို့ ...
in: Uncategorized, အတွေးအမြင်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး
စိမ်းလန်းသောထိုရနံ့က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ လူသားတိုင်းအပေါ် သစ်လွင်လတ်ဆတ်သော စိတ် ကူးစိတ်သန်းများ ရှင ...
Posted by: မြတ်လှိုင်း
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစမှာ ခြေစလှမ်းနေပါပြီ။ဒါပေမယ့်လမ်းကိုခြေလှမ်းမှန်အောင်မလျှောက်နိုင်သေးပါဘူး။မလျှောက်နိုင်အောင် ပြဿနာပေါင်းစုံဖန်တီးပြီးခလုပ်တိုက်ချော်လဲနေပါတယ်။ချော်လဲကျနေတာကိုပြန်ထူထနေရတာနဲ့အချိန်တွေကုန်ပြီး လမ်းဆက်မလျှောက ...
အပိုင်း ( ၁ )(သမိုင်း။ န – နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ အဆောက်အအုံ စသည်၏ ဖြစ်စဉ်။ ယင်းကိုလေ့လာသောပညာရပ်။ [ ပါ ၊ သမ္မုတိ ] လို့ မြန်မာ အဘိဓါန်မှာဆိုထားပါတယ်။)ဆိုလိုတာက သမိုင်းဆိုတာ ဖြစ်စဉ်တွေလို့ ကျနော်တို့ အနက်ဖွင့်ကြမယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါ။ လူတဦးတယောက်ြ ...